မွနျမာနဲ့ ကမ်ဘာက ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ပွဿနာ - BBC News မွနျမာ
BBC News မွနျမာ
มุมมอง 160 233
98% 1 573 29
ဘီဘီစီ မွနျမာတီဗီ - ၂၄ မတျ ၂၀၂၀
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုး ရှိတဲ့သူတှကေို ပထမဆုံးအကွိမျ တှရှေိ့၊ သူတို့က ဘယျသူတှလေဲ၊ အာဏာပိုငျတှဘေကျက ဘာတှဆေောငျရှကျနလေဲ
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှုတှေ စခဲ့ရာ ဝူဟနျမွို့ မှာ ကူးစကျမှု သဈတှေ ကသြှားပွီ ဖွဈတာကွောငျ့ မွို့ကို တံခါးပိတျ ထားရာကနေ ပွနျဖှငျ့ပေးဖို့ အာဏာပိုငျတှကေ စီစဉျနကွေ
ကျောရိုနာ ဗိုငျးရပျဈပိုးတှေ မကူးစကျစဖေို့ ဘယျလို နညျးနဲ့ လကျဆေးရငျ အကောငျးဆုံး ဖွဈမလဲ
မလေးရှားက ကှာလာလမျပူ မွို့တျောမှာ မွို့ခံတှကေို ကုနျစုံဆိုငျတှမှော စြေးဝယျတဲ့ အခါမှာ မကျြနှာဖုံးတှေ တပျထားကွဖို့ အတှကျ အမိနျ့ထုတျထား
အမရေိကနျ သမ်မတ ထရမျ့ကတော့ အမရေိကနျ ပွညျထောငျစုထဲမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှုတှကေို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ ပွဋ်ဌာနျးထားတဲ့ ကနျ့သတျမှုတှဟော လနဲ့ ခြီပွီးတော့ မကွာနိုငျလို့ မြှျောလငျ့ထားကွောငျး ပွော
ဘရာဇီးက ရီယိုဒီ ဂနြီရိုး မွို့ ဆငျခွဖေုံးက ရပျကှကျတှမှော ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှုကို ထိနျးခြုပျဖို့ ရာဇဝတျ ဂိုဏျးတှကေ ညမထှကျရ အမိနျ့ထုတျ ယူကေ လကျဆေးနညျး
#မွနျမာ #ခငျြးပွညျနယျ #တီးတိနျ #ဝူဟနျ #ကျောရိုနာဗိုငျးရပျဈ #အင်ျဂလနျ #မလေးရှား #အမရေိကနျ #သမ်မတထရမျ့ #ဘရာဇီး #ရီယိုဒီဂနြီရိုး #ဝူဟနျ #တရုတျ #ထိုငျး #မလေးရှား
Koko Lwin5หลายเดือนก่อน
Hannah Khin5หลายเดือนก่อน
Comment section မှာ မွနျမာတှရေဲ့ စိတျဓာတျတှကေို သခြော မွငျခဲ့ရပါတယျ စိတျပကျြမိပါတယျ
Hooded1236หลายเดือนก่อน
me am india me very scar of virus like dis could kil all familee
Myo Min6หลายเดือนก่อน
nga lone6หลายเดือนก่อน
htet oo6หลายเดือนก่อน
ပြန်သင့်မပြန်သင့်မစဉ်းစာကြဘူးလူတွေပညာတက်သလောက်အသိဥာဏ်ခေါင်းပါတယ်တကယ်ဆိုပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ကောင်းတွေကောင်းမတွေငါအပါဝင်ရောဂါရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေသေရေးရှင်ရေကိစ္စနဲ့ပြန်တာကတစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီးအိမ်ပြန်တော့ရောကို့မှာဒီရောဂါရှိတာမသိဘူးမိသာစုနဲ့တွေ့မယ်အားလုံးကူးခံရမယ်ပြီးတော့နိုင်းငံမှာပျံ့မယ်စောက်အသိတရာမရှိဘူးမင်းတို့ပညာတက်တွေဖြစ်ပြီးအတွေးခေါ်တွေကသူငယ်တန်ကလေးအဆင့်တောင်မရှိဘူးခုဘယ်လိုလည်းအားလုံးကူးစက်ခံရတော့မှာအသေခြာကို့နိုင်းငံအကြောင်းကိုတွေသိနေတာပယ်ခဏတာတော့သည်းခံစောက်ဆိုင်ကြပေါ့ငါလိုးမသားတွေငါလည်းပြည်ပမှာအိမ်ပြန်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဖတ်ဖတ်ကတွေပြီးသေရင်ကိုတစ်ယောက်ပယ်သေမယ်မိသာစုနဲ့နိုင်းငံကိုတော့ဆွဲမခေါ်သွားဘူးမင်းတို့သေမှာကြောက်တာထက်မိသာစုအတွက်နိုင်းငံအတွက်ကြေက်ကြပါလို့ကိုဖြစ်ရင်ကိုခံရဲရမှာပေါ့ခုလိုဘုမသိဘမိသိအိမ်ပြန်တော့အိမ်ကလူတွေအားလုံးသွားပြီးပေါ့အထူးသဖြင့်မိဘတွေခံနိုင်ရည်ရှိကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီရောဂါဖြစ်ရင် လူလိုသိငါသေရင်တစ်ယောက်ထဲငါန်ြရင်မိသာစုပါ အားလုံးသေစေနိုင်းတယ်ဆိုတာလူလိုတွေးကြ
Kojeeaung Kojeeaung6หลายเดือนก่อน
Soe Koko6หลายเดือนก่อน
myo wannakyaw6หลายเดือนก่อน
နောကျဆုံး videoထဲက ဆရာမလေးကိုခဈြတယ
karen karen6หลายเดือนก่อน
တရုတ်တွေညဏ်ကောင်တယ် ဆေးတွေကသူတို့နိုင်ငံမာဘဲတွေ့ ရှိတယ် အခုသူတို့နိုင်ငံမာဆေးရှိပြီး အခုသူတို့နိုင်သား သူတို့ကု့သတ်ပြန်လာကောင်းကုန်တော့မယ် သူတို့နိုင်ငံဆေးရရှိပြီး အခုသူတို့ဆေးကို နိုင်ငံတံကားတွေနဲ့သူတို့ပြန်ရောင်းတယ် အီတလီနိုင်ငံကလူတွေထိများတယ်သေများတယ်မာလာ အီတလီနိုင်ငံကိုသွားပို့တယ် တအားဆေးကြီးတယ် သူတို့ဆေးတွေ တအားဆေးကြီးကြီးသူတို့ပြန်ရောင်းတယ် ဖြစ့်လာတော့ကသူတို့နိုင်ငံမာ သူတို့နိုင်ငံကလူတွေ နေမရဲတော့ သူများနိုင်ငံတွေထွက်ပြေးလိုက်တယ် ဟိုနိုင်ငံသွားလိုက် ဒီနိုင်ငံလာလိုက် ရေားဂါလဲပါသွားလိုက် သူများနိုင်ငံသားတွေသွားကူးတယ် အခုသူများတွေ ဆေးမရှိဘူး ဆေးလိုတယ် သူတို့နိုင်ငံမာဆေးရပြီးတော့ သူများနဲ့ပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ဆေးကြီးကြီး
Sut Seng6หลายเดือนก่อน
tin nyunt6หลายเดือนก่อน
THANKS! BBC BURMESE NEWS.
786swe6หลายเดือนก่อน
Hope they inform the Airline.
YE NAING TUNさん6หลายเดือนก่อน
Zaw Zaw6หลายเดือนก่อน
တာဝနျရှိသူတှကေ ခငျြးအမြိုးသားကို အိမျပွနျမလှတျသငျ့သေးဘူး..ရနျကုနျမှာ စောငျ့ကွညျ့ပွီးမှပွနျလှတျသငျ့ခဲ့တာ....
J\_D Dinh6หลายเดือนก่อน
We r worrying about foods, medicines and oils ,here in Chin state.
Hibed De26หลายเดือนก่อน
Sai aung htoo6หลายเดือนก่อน
ဝင်နေကျ ထွက်နေကျ သတ္တဝါအားလုံးနဲ့ မြန်မာပြည်က လိမ်နေကျ သတ္တဝါအားလုံး ကိုကိုနာဘေးမှ အထူးကင်းဝေးကြပါစေ ။ ဖြစ်လာပြီးမှ ဟိုစစ်ဒီစစ် တောင်ပြောမြောက်ပြော ဆူညံငရဲပွက်လို့ ပြည်ပကဝင်လာသူ တယောက်ကို အထူး စောင့်ကြည့်ကုသပေးနိုင်ရင် နောက်လူတထောင်တသောင်းကို ကာကွယ်ရာရောက်ပြီးသားပါ လုပ်နေတာက ထိထိရောက်ရောက် ဘာမှကိုမရှိဘူး ခုတော့အခက်ကြုံပါပြီ မိယာန်မာ
khar run6หลายเดือนก่อน
myanmar country number one lying you're very very afraid China cause happen it's coronavirus politics i'm from myanmar but i can't believe that myanmar leader, i will never believe don't believe that China country what they help you, they take all everything from myanmar to Chima
Majid Khan6หลายเดือนก่อน
yes you're absolutely right that Chinas are very dangerous monstars
Gf Gf6หลายเดือนก่อน
Fir Zoe6หลายเดือนก่อน
Mi Mi6หลายเดือนก่อน
someone know Dr. Lora ( Burma ) Contact , email , FB etc..?
Zaw Win Mon6หลายเดือนก่อน
myoe lay6หลายเดือนก่อน
sian lal6หลายเดือนก่อน
fuck you china and virus!!!!
yin kyi6หลายเดือนก่อน
ထိုင်းက ပြန်လာသူတွေ စောက်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းတွေ ပြုလုက်ပေးပါ ဘယ်နိုင်ငံကပဲဖြစ်ဖြစ် အဝင်စစ်ပါ စောက်ကြည့်ပါဗျို့
pyae sone aung5หลายเดือนก่อน
aung chit6หลายเดือนก่อน
မှန်းတာပေါ့ စစ်ဆေတင့်တယ် ဒါတစ်ကယ်အရေကြီးတယ်
ချစ်တယ်သူရာ ချစ်တယ်သူရာ6หลายเดือนก่อน
yin kyi ဟုတ်တယ်ထိုင်းကပြန်သူတွေ ပေးမဝင်သစ်ဘူး
ktwo ktwo6หลายเดือนก่อน
aung aung6หลายเดือนก่อน
Khan 16หลายเดือนก่อน
Khan 15หลายเดือนก่อน
@Zar Zar ရောဂါကူးရငျလူတှတှေကေပဲကယျလို့ရရငျရမရရငျသမှောပဲဖုရားစာပဲရှပျရှပျဘာရှပျရှပျသမှောပဲသူတို့သတောကပွသနာမရှိဘူးကနျြတဲ့သူတှပေါရောဂါတှကေူးစကျပွနျ့နှံသှားရငျအားလုံးဒုပျခရောကျကုနျမှာသိလား🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Zar Zar5หลายเดือนก่อน
အလေေ သရေငျလညျးသပေလစေ့ေ ဘုရားစာရှတျပွီးသတေော့ပိုတောငျမွတျသေးတယျ ခှေးစာရှတျပွီးသမေယျ့လူတှနေဲ့စာရငျပေါ့
@Zar Zar ရောဝါကူးစကျရငျဖုရားလဲလာမကယျဘူးပိုကျဆံရှိလဲကုလို့ရရငျရမရငျသမှောပဲလူလူခငျြးပဲကယျလို့ရရငျရမရရငျသမှောပဲဖုရားကိုတောငျလူတှကေပိုကျဆံကုနျခံလူအငျအားငှအေငျအားနဲ့လုပျမှဖုရားပုံပျေါလာတာရောသိလားကိုရငျလဲလူပဲဟာကိုတယောကျကူးစကျရငျအားလုံးမသာပျေါကုနျမှာကအရငျသိလားဖုရားစာရှပျလဲသမှောပဲရောဂါကူးစကျရငျ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Zar Zar6หลายเดือนก่อน
အလေေ နငျ့ရဲ့ နုတျ ကထှကျတဲ့ဝဇီအကုသိုလျကံကဘယျလောကျအရေးပါတယျဆိုတာနငျတနသေိ့လိမျ့မယျ နျော ပွေးလို့မလှတျပါဘူး
@Zar Zar ငါတို့ကမသာပျေါရငျလဲပွသနာမရှိဘူးလူသူနဲပါးတဲ့နရောမှာသီးသနျ့နကွေတာဖုနျးကွီးတယောကျကူးစကျရငျတောကျရှောကူးစကျသှားမှအားလုံးမသာပျေါကုနျမှာဖုနျးကွီးကြောငျးမှာကဖုနျးကွီးတှကေအမြားကွီးဆှမျးခံထှကျတာတို့ဘာတို့စိုရငျအားလုံးကူးစကျပွနျ့နှံသှားမှာသိလား
A Channel6หลายเดือนก่อน
@၂း၁၉ ၊ဗမာသငျကနျးခွုံတှေ လမျးဘေးမှာရပျပွီး တောငျးစားကွတာ ဗမာ့သာဿနာ ယဉျကြေးမှုကွီးတခု ဖွဈလို့လာပါပွီသြှငျ။လကျကွီးဘဲဆေးမနကွေနဲ့, ၊ကိုယျ့ဖငျနဲ့ကိုယျ့လိငျအငျဂါကိုလညျး သနျ့အောငျဆေးကွအုံးလေ။စိတျခရြအောငျ ကှမျးရှကျပွုတျရညျနဲ့ ခကျြထားတဲ့ ရနျကုနျမွို့က ရောဂါသညျခြီးစားခှေးဟငျးကြှေးပွီး ကုလားကွီးသီတဂူရမေနျးကိုသာ တိုကျလိုကျပါ။😂😂😂😂
khinekhineoo 4775หลายเดือนก่อน
@Zar Zar သတိထားရမှာက အဲဒီလို ဗမာသငျကနျးခွုံတှေ မွို့လညျခေါငျလမျးဘေးမှာရပျပွီး တောငျးစားကွတာ ဗမာ့သာဿနာ ယဉျကြေးမှုကွီးတခု အဖွဈ လကျခံလိုကျကွတာပါဘဲ။နောငျဆိုရငျ တရုပျဘုနျးကွီးအတုတှထေကျပိုဆိုးလာပါမယျ။ သီရိလငျကာ မှာတော့ သငျကနျးခွုံတှကေို အစိုးရက လစဉျထောကျပံကွေးငှပေေးထားတာတောငျ နညျးမြိုးစုံနဲ့ ငှလေိမျတောငျးခြူကွတာ တှခေဲ့ရတယျသြှငျ့။
@Muu York ကုလားကွီးသီတဂူရမေနျးလားသြှငျ့?😁😁😁
Muu York6หลายเดือนก่อน
Sai Yi Aung6หลายเดือนก่อน
IF I HAVE LONG LIFE .I HOPE YOU WITH ME .MG ZAY YAR.
ဧရာ ဧရာ6หลายเดือนก่อน
ဘယ်နှစ်ရက်နေ့သတင်းလည်း 🇲🇾မလေးရှား 🇲🇾 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှားနေပါတယ်
thang sian6หลายเดือนก่อน
ဒီလို အခြိနျ မြီူး မှာ ဘာ လိူ့ ခရီး ထှကျ နေ တာ လဲ
Min Chit6หลายเดือนก่อน
Love u Dr. Laurel
တရုပျမတကောငျ ဘငျဂါလီလို ကပွနတောကိုး ။😂😂😂😂
mohamadishak malek6หลายเดือนก่อน
တရုတ်ပိုး ကိုကိုနာ အမင်ဂလာပါခင်ဗျား
2ဦးမကဘူး ၁၀၀၀ ကျော်နေပြီNLD စစ်တပ်ဗြောင်လိမ်ျနဒါ
Kyu Thein6หลายเดือนก่อน
Don't eat again stupid animals China 🇨🇳
cuttie lu6หลายเดือนก่อน
sai min aung6หลายเดือนก่อน
၁ယောကျခငျြးစီဘာကွောငျ့ထားတာလဲ ၃ ယောကျ၆ယောကျစီထားမယျဆိုငျ ရောဂါကူးနိုငျတယျလေ
Abdul Rohim6หลายเดือนก่อน
လူမျိုးတိုင်းကိုခင်တယ် နိုင်ငံကိုတော့မဆော်ကားနဲ့ ကုလားစုပ်ကောင်
@pyae sone aung ပြောလိုက်ကွာ သူများဘာသာသုံး သူများ နိုင်ငံမှာနေပြီး အရှက်မရှိကောင်တွေ ကျန်တဲ့ ကုလားလူမျိုးတွေကိုတော့မပြောပါဘူး
နေစရာမရှိ ကုလားစုပ် ငါတို့နိုင်ငံမှာ မှီတင်းနေထိုင်ရတဲ့ဘဝ ဘင်ကုလီဘက်ကလဲပြန်မခေါ် သနားစရာ အလာလ် အလာ် ရှင်မျက်ကြီးရေ ခွေးမျိုးလေးတွေ😁😁😁
Nay Min6หลายเดือนก่อน
BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကို သိချင်တာလေး မေးပါရစေ ပဲခူးက စက်ရုံတွေ မပိတ်တော့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့စက်ရုံအလုပ်သမားတွေ က ရောဂါကူးစက်မှာ ကိုလည်း စိုးရိမ် လစာမရမှာကိုလည်း စိုးရိမ် နေရပါတယ် စက်ရုံက ဖွင့်ထားတော့ အလုပ်မဆင်းလို့ ၂ ရက်ကြာရင်အလုပ်ဖြုတ်ပါတယ် ။ လကုန်ရက်လည်း မဟုတ်တော့ လစာလည်း မထုတ်ပေးပါဘူး။ ဆင်းရဲသားတွေ အတွက် လစာရမှ စားဖို့ ဝယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ စက်ရုံကမှ တစ်ကယ့် လူစုလူဝေးပါ ။ စက်ရုံတွေ ဘာ့ကြောင့် မပိတ် တာလည်း ဘာ့ကြောင့် မပိတ်ခိုင်းတာလည်း သတင်းရရင်တင်ပြပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
SKY COOLING6หลายเดือนก่อน
ဘယ်သူပြောလဲ 625 ယောက် သတင်းမှန်ုကန်လိုက်တာ bbc myanmar ရယ် မလေးရှားမှာ ကူးစပ်သူ1618 သေဆုံးသူ 16 ယောက် 24-3-2020ရက်နေ့ထိ မသိရင်လဲသတင်းလုပ်ပြီးပြောမနေပါနဲဗျာ
ဟုတ်ပါ့ဗျာ ၁၆၂၄ ပါ
SKY COOLING 🥵🥵🥵🤪🤪
Lin Thit6หลายเดือนก่อน
မြန်​မာ နိုင်​ငံ မှာ မကူးပဲ ဘယ်​​နေမလဲ တံခါးက အမြဲ ဖွင့်​ထား​တော့ ​ရောဂါ ကို လက်​ယက်​​ခေါ် ​နေသလိုပဲ
rakhine thar6หลายเดือนก่อน
Ko Too6หลายเดือนก่อน
မသာ အစိုးရ ပြောယင်လဲ တစိတ်ရှိအစိုးရလို့ပြောအုန်းမယ် ဖွင့်ထားတာ သွားလာခွင့်လမ်းကို ကို့နိုင်ငံမှာ ဒီလောက်ဆိုးဝါးနေတာတောင်မကူးတာ ခုတော့ ကူးပီ အမိန့်ထုပ်ကြည့်ပါလားအစိုးရက ဘယ်သူကလုပ်ရဲမလဲ အကုန်သေကြအေးရော NL D အစိုးရစောင့်သုံးမကျတာ အကုန်ပဲ
La yaung kiss La yaung kiss6หลายเดือนก่อน
bibi rabiya6หลายเดือนก่อน
do you think so they got from foreign countries. not from china. I want to launught.
bibi rabiya5หลายเดือนก่อน
Hannah Khin stupid girl , you know English better than me. do you know I live in Canada. spelling is right or wrong doesn't matter. don't teach me. who care about spelling
At least spell ' laugh ' right
myanmar Leaders they very very afraid China because happen in the world number one lying myanmar leader
win zayar6หลายเดือนก่อน
ko ko6หลายเดือนก่อน
Owen Owen6หลายเดือนก่อน
ရိက်ခါ မလုံလောက်မှာစိုးလို့ မဟုတ်ဘူး အမေရေ့..အိမ်ပြင်ထွက်စရာ မလိုအောင် ဝယ်ထားကြတာ...ဈေး နေ့တိုင်းသွားမည့် အစား တစ်ပတ်မှတစ်ကြိမ် သွားတော့ ကောင်းတာပေါ့ အမေရယ်...ဝယ်နိုင်တဲ့သူဝယ်ပါစေ... ကုန်ဈေးနှုန်း မတက်ဘို့သာ သွန်သင်လိုက်ပါ ဗျ..အိမ်ပြင်ထွက်တာ နည်းလေလေ ပိုးကူးစက်မှု သက်သာလေလေ မဟုတ်ပါလား ခင်ဗျာ...
ရှင်းသန့်မေ ရှင်းသန့်မေ6หลายเดือนก่อน
ပြည့်ဖြိုးကျော် ok6หลายเดือนก่อน
အိန်ဒိယမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရသူ ၅ သနျးရှိလာ - BBC News မွနျမာ
ရနျကုနျ ကိုဗဈ-၁၉ စဈပှဲ ဘယျအခွအေနေ ရှိနလေဲ - BBC News မွနျမာ
ဆဲဆိုမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ဖြူဖြူထွေး - BBC News မြန်မာ
Fixing things to help the planet: BBC News Review